wararka maanta-arlaadii.net » 2017 » December » 2
Hogaamiyaha Alshabaab oo wata Ciidamo tira Badan oo lagu arkay Gobolka Gedo
Hogaamiyaha Guud eee ururka Al-Shabaab Axmed Diiriye oo loo yaqaano Abuu-Cubeyda iyo Boqolaal ka mid ah Ciidanka Al-Shabaab ayaa maanta lagu arkay deegaano ku yaalo duleedka magaalada Garbahaarey ee xarunta Gobalka Gedo sida ay soo sheegayaan dadka deegaanka. Saraakiil ka mid ah...
Madaxweyne Farmaajo Oo Maanta Dalka dib Ugu soo laabtay
Madaxweynaha dawlada Federalka ee Soomaliya Maxamed Cabdulahi maxamed Farmaajo ayaa maanta Dib ugu soo labtay Dalka kadib Safar uu ugu maqnaa mudo lix maalmood ah dalal africa ku yaalo. Madaxweynaha oo ay wehliso Marwadiisa iyi wufuud kale ayaa waxaa Garionka weyn Ee Aadan xade...
Kulanka Arsenal iyo Manchester united oo aad loo wada sugayay Oo cawa dhacaysa
Iyadoo lagu wada maanta in la cayaaro kulanka 15 ee Horyaalja Epl ee england ayaa waxaa Kukanka aad u xiisa vadan waxaa uu ka dhici doonaa Garoonka EMIRATES ee Magalada London . Kulankani ayaa waxa uu dgex mari donaa Nadoyada inta badan xifaltinka ka dhaxeeyo Ee ARSEBAL IYO...
Dayaxa oo si dhameestiran loo Arki doono Maalinta Berito ah
Waxaa maalinta beri ee Axada ah la saadaalinayaa in Dayaxa si buuxa ama dhamestiran loo arki doono in muda ah. Culumada seynis iyo kuwa cirbixiýeenada eeku taqasusay Cilmiga Falaga ayaa shegay in Axada 3 bisha December si buuxda loo arki doono Dayaxa ama Bisha. Goobaha laga arki...
Howlgal iyo Baaritan adag oo Ka socda wadooyin Muqdusho
Ciidamada dowladda ayaa wadooyinka Magaalada Muqdisho, waxa ay ka wadaan hawlgal baaritaan gaadiidka ah, iyadoo la dareemaayo feejignaan dhanka ammaanka ah. Wadada dheer ee Maka Al-Mukarama ayaa waxaa baaris xooga lagu haayaa gaadiidka kala duwan ee halkaasi maraya, sidoo kale...
Wazirka cusub Gaashaandhiga Oo maanta la wareegay Xilka
Munaasabad Aad u baalaran ayaa manta lagu qabtay Wazarada gaashandhiga Dalka Munaasbadani oo Ku Saabsaneyd Xil Wareejinta Wasaarada Gaashandhiga Soomaliya Ayaa Waxa Kasoo Qeyb Galay Mas’uulin Ka Tirsan Dowlada Soomaliya guddiga Difaaca ee Baarlamaanka Soomaaliya Wasiiro...
Moshinki ka dhanka ahaa Madaxweyne Farmaajo oo sii xoogeesanayo
Iyadoo beryihii ugu dambeeyay ay isasoo tarayay mooshin ka dhan ah Madaxweyne Maxamed cabdulahi Farmaajo ayaa sacadihii ugu dambeeyay waxaa soo baxaya warar sheegayo in ay korartay Xildhibaanada saxiixay moshinkaas . Magaalada muqdisho ee caasimada ah ayaa ah mid aad mashquul ah...